» टिकटकमा १ करोड भन्दा बढी मान्छेले हेरेको र खोजेको भाइरल सानो भाई यिनै हुन् !आखिर को हुन त उनी? हेर्नुहोस भिडियो सहित टिकटकमा १ करोड भन्दा बढी मान्छेले हेरेको र खोजेको भाइरल सानो भाई यिनै हुन् !आखिर को हुन त उनी? हेर्नुहोस भिडियो सहित – हाम्रो खबर
टिकटकमा १ करोड भन्दा बढी मान्छेले हेरेको र खोजेको भाइरल सानो भाई यिनै हुन् !आखिर को हुन त उनी? हेर्नुहोस भिडियो सहित
2021, January 9th, Saturday
भिडियो तलको समाचारको अन्त्यमा राखिएको छ । काठमाडाैं : भारतको खोप उत्पादक कम्पनी भारत बायोटेकले नेपालमा पनि कोरोना खोप ‘कोभ्याक्सिन’ क्लिनिकल ट्रायल चलिरहेको झूटो दाबी गरेको पाइएको छ ।
यद्यपि दुवै खोपको प्रभावकारितालाई लिएर सुरुदेखि नै विवाद सुरु भएको थियो । विशेषगरी सरकारले यी खोपले अनुमति प्राप्त गर्नका लागि पेस गरेका क्लिनिकल ट्रायलको डाटा सार्वजनिक नगरेका कारण पनि आशंका प्रकट गरिएको छ ।, यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको छ ।
अब प्रस्तुत छ भाइरल आयुष घर्ती मगर सानो भाइ सग कुराकानी गरिएको भिडियो…